ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အခမ်းအနား ပါဝင်ဆင်နွဲ
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) မှ ကျောင်းသား/သူများသည် ၁၃.၂.၂၀၁၉ရက်နေ့၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ကျောက်တိုင်ကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဖွင့်ပွဲ၊ ပြခန်း၊ ဖျော်ဖြေရေး စသည့်ကဏ္ဍအသီးသီး၌ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အခမ်းအနား ဖွင့်ပွဲတွင် အသုံးပြုမည့် ဗိုလ်ချုပ်ပုံအား စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ရန် နည်းပညာ အကူအညီကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ ကျောင်းသားများက ဖန်တီးပြုလုပ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
မေဂျာပေါင်းစုံမှ Projectများ ပြသခြင်းနှင့် ကချင်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား/သူများမှလည်း ပါဝင်ကပြတင်ဆက်ခဲ့သည့်အပြင် အခမ်းအနားအစီစဉ်ကြေငြာသူ၊ ဖဲကြိုးဗန်းကိုင်များအဖြစ်လည်း ကျောင်းသား/သူများမှ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့သည် ကလေးများနေ့လည်း ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ နည်းပညာကော်မတီမှ DIY Gameများ ဖန်တီးပြုလုပ်၍ ကလေးများ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနိုင်စေရန်၊ နည်းပညာနှင့် ပက်သက်၍ လေ့လာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Participate the Birthday Ceremony of General Aung San
The students from University of Technology(Yadanapon Cyber City) participated in the section,open ceremony,showroom and performance respectively which was holded at the Birthday Ceremony of General Aung San at Pyin Oo Lwin's Commemorate,13.2.2019. Students from University of Technology (Yadanapon Cyber City) helped the technology to open the photo of General Aung San with switch which used at the Birthday Open Ceremony of General Aung San. The students from all majors displayed their projects and the Kachin, Rakhine and Shan students entertained.In addition , they also participated as presenters . As the General Aung San Birthday is the Children's Day, The student's union from technology committe created DIY Games for children to have them fun and to place more emphasis on the enthusiam of technology.